ရခိုင် ဒုက္ခသည်များ ရေသန့်၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဆေးဝါး အရေးပေါ်လိုအပ် ~ Myanmar Express
ရခိုင် ဒုက္ခသည်များ ရေသန့်၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဆေးဝါး အရေးပေါ်လိုအပ်
From : The Voiceဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ဒုက္ခသည် ဦးရေ လေးသောင်းကျော်ထိ မြင့်တက်လာသော ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဒုက္ခသည်များ ရေသန့်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါး၊ အိမ်သာများ အရေးပေါ် အကူအညီ လိုအပ်နေကြောင်း ရခိုင်ဒုက္ခ သည်များ အရေးကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသူများက ပြောကြားသည်။“၀မ်းရောဂါ အရမ်းပြင်းထန်လာပြီ။ အသည်းရောင် အသားဝါ ရောဂါတွေ ထပ်တိုးလာတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း ဘာမှ မထောက်ပံ့ဘူး“ ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီမှ ပါတီဝင်တစ်ဦးက ပြောကြား သည်။ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှု များကြောင်း နေရပ်စွန့်ကာ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြ ရသည့် ဒုက္ခသည်များ ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို ရခိုင်လူငယ်များ အဖွဲ့စည်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဘေး ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တို့က ပေးဝယ်နိုင်ရန်စီစဉ်လျှက်ရှိကြောင်း ရခိုင်လူငယ်များ အဖွဲ့အစည်းထံမှ သိရသည်။ရခိုင်လူငယ်များ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဘေးဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တို့မှ တစ်ဆင့် ရခိုင် ဒုက္ခသည်များကို လှူဒါန်းလိုပါက-ဦးခင်မောင်လင်း (ရခိုင်လူငယ် အဖွဲ့အစည်း၊ စစ်တွေမြို့) ဖုန်း ၀၉၇၃၀၁၈၉၄၂၊ဦးမောင်လေး (ရခိုင်လူငယ် အဖွဲ့အစည်း၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်) ဖုန်း ၀၉၄၂၁၀၁၁၃၆၇၊ဦးရဲမင်းဦး (ရခိုင်လူငယ် အဖွဲ့အစည်း၊ သံတွဲမြို့နယ်) ဖုန်း ၀၉၄၅၀၀၃၄၂၃၁၊ဦးကျော်မင်း (ရခိုင်လူငယ် အဖွဲ့အစည်း၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ လေးတောင် ရပ်ကွက်) ဖုန်း ၀၉၇၃၀၇၅၆၉၇၂၊ဦးသန်းကြည် (ရခိုင်လူငယ် အဖွဲ့အစည်း၊ မင်းပြား) ဖုန်း။ ၀၉၇၃၀၁၀၇၅၄၊ဦးဖြူချေ (ရခိုင်လူငယ် အဖွဲ့အစည်း၊ ပေါက်တောမြို့နယ်) ဖုန်း။ ၀၉၇၃၁၅၀၈၇၁၊ရခိုင်ပြည်နယ်ဘေး ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ကော်မတီရုံး၊ ဓည၀တီ သာသနာပြု ကျောင်းတိုက်၊ ဦးထင် ပေါ်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ဖုန်း -၀၉၄၂၀၁၀၇၄၀၀။ ၀၉၄၂၀၁၀၄၅၇၀၊စစ်တွေမြို့ရှိ ဒုက္ခသည်များကို လှူဒါန်းလိုပါက -ဦးအောင်ကျော်ဝင်း (၀ံလက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း) ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၇၁၁၅၈၈ဦးသိန်းဝင်း (၀ံလက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း) ဖုန်း ၀၉-၄၉၆၆၂၅၆၈ဦးသိန်းထွန်းအေး (၀ံလက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း) ဖုန်း ၀၉-၄၃၁၅၄၀၁၂ဦးစံကျော်လှ (ရခိုင်တိုင်းရင်းးသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ၊ စစ်တွေမြို့ဗဟိုဌာန) ဖုန်း ၀၉၈၅၀၀၈၁၆ရခိုင်တိုင်းရင်းးသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ( ရန်ကုန်ရုံးချုပ်၊ မလွှကုန်းလမ်း၊ တာမွေ၊ ကျောက်မြောင်း) ဖုန်း ၀၉၇၃၀၄၄၉၂၇ရသေ့တောင် ဒုက္ခသည်များကို လှူဒါန်းလိုသူများသည် ရန်ဘုံငွေ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ ဦးကျော်စိန်လှ ဖုန်း- ၀၉၄၉၆၇၆၁၁၁၊ ဦးထွန်းလှ ဖုန်း- ၀၉၈၅၃၂၃၅၉၊ ဦးဦးသာဇံ ဖုန်း- ၀၉၄၉၆၇၆၀၆၇ တို့ကို ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့ထံမှ သိရှိရသည်။လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားပေးရေး မှ တစ်ဆင့် ရခိုင်ပြည် ဒုက္ခသည်များ လှူဒါန်းလိုပါကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မီးသတ်ဦးစီးဌာန ဖုန်း ၀၁- ၅၆၀၃၅၁၊ဦးဝင်းထွဋ်ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ) ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ဖုန်း - ၀၆၇- ၄၀၄၃၁၆ Myanmar Express
17 June 2012 05:45
Myanmar government first main operation is (1) deport all illegal 700 000 Bangladesh Rohingya Muslims and Muslims from Rakhine state and Myanmar to Bangladesh . Rohingya muslims will ask another muslim country for Rakhine state in future like Pakistan and Bangladesh from India if Myanmar government don’t deport illegal 700,000 Rohingya muslims from Rakhine state now. (2) Arrest and prison all current and former Myanmar immigration officers who took bribe from Rohingya muslims and Myanmar Muslims for National ID and fake Birth Certificate. (3) All immigration officers and staffs in Bangladesh Myanmar border and Rakhine state must be Rakhine immigration officers and staffs because Rakhine officers don’t take bribe from Rohingya muslims for National ID cards because of their patriotic . (4) All Myanmar troop in Bangladesh Myanmar border must be Rakhine soldiers and shoot anybody cross river and come to Myanmar side. All immigration officers and staff must be Rakhine people and pay good salary them to avoid corruption. (5 )Establish good economy in Maungdaw Town and other muslim majority towns in Rakhine state and make good economy and transportation to these towns to attract more Rakhine and Myanmar people to settle in these towns . If so, Rakhine and Myanmar people will be majority in future . Move to Muslim majority towns.
၉၆၉ က အသုံးချဖို့ ကြိုးစားတာကို ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ ငြင်းပယ်ရပါတဲ့ ဆိုတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ အဆိုတော် ရဲလေး၏ ဖခင်သေဆုံး သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ထုံးစံအတိုင်း ရက်လည် ဆွမ်းကျွေး ရေစက်ချ တရားတော်နာ ပြုလုပ်ခဲ့
အဆုံးအမပေးနိုင်ကြသော ဗုဒ္ဓအမည်ရသည့် ဘုရားတို့သည် ၄-မျိုးရှိသည်ဟု အင်္ဂုတ္တိုရ်အဋ္ဌကထာ၌ ဖော်ပြထားပေသည်။(အံ-ဋ္ဌ ၁-၈၉)
၁။ သုတဗုဒ္ဓ-ပိဋကတ်ကျမ်းဂန်တို့၌ ဗဟုသုတရှိသည့် ...
ကျောင်းဖွင့်တော့မည် သို့သော် ကလေးတိုင်း ကျောင်းမတက်နိုင်ကြပါ၊ NLD ပညာရေးကွန်ယက်တွေ၊ လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ယက်တွေ ပိုက်ဆံကောက်ပြီး ပျောက်နေ
ဤရက်များအတွင်း မဟာစင် မုန် တိုင်းကြောင့်လောမသိ။ ရာသီဥတုက မူမမှန်။
အနောက်တောင်ဆီမှ တစ်လိပ် လိပ်တက်လာနေသည့် တိမ်မည်းများ နှင့်အတူ ညိုမှောင...
သမ္မတကြီး အပေါ် အပြစ်ရှာသူများသို့ သတိပေးခြင်း (အထူး သတိပေးခြင်း)
ခုတလော FB မှာ ဦးသိန်းစိန်ကို စကားအထအနကောက်ပြီး ပြောနေတာ
တွေ့လို့ Nay Min ဝင်ရှင်းလိုက်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောသွားတဲ့နေရာက အမေရိကရောက်မြန်မာမ...
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် CNN နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်ချုပ် Christiane Amanpour တို့၏ အင်တာဗျူး။
Christiane Amanpour - အရင်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ အမေရိကန်ရဲ့ နံပါတ်တစ် ရန်သူပါ။ အဲဒီ အခြေ အနေတွေကနေ အခုလိုမျိုး မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးတက်လာတာ သမ္မတကြီးလည်း...